मदन भण्डारी राजमार्ग : रुख काट्ने प्रक्रिया ढिलो हुँदा समस्या « Loktantrapost
२१ फाल्गुन २०७८, शनिबार ०५:२९
।। अम्बिका भण्डारी ।
झापा, २१ फागुन । मदन भण्डारी राजमार्गको धरान–झापा खण्डको सडक निर्माण कार्य हाल सम्ममा १२ प्रतिशत मात्र भएको मदन भण्डारी राजमार्ग योजना कार्यालय दमकले जनाएको छ ।
धरानदेखि पूर्व मेचीसम्मको करिब १२५ किलोमिटर सडक खण्डमध्ये ६३ किलो मिटरको ठेक्का व्यवस्थापन भइसकेको कार्यालयका सूचना अधिकारी सजित शर्माले बताए ।
सर्दुखोलादेखि बेलडाँगीसम्म ५३ किलोमिटर र शान्तिगरदेखि बाहुनडाँगीसम्मको १० किलोमिटरको ठेक्का निर्माण व्यवसायी श्री श्रेष्ठ–मोतिदान जेभी काठमाडौंले लिएको छ ।
तीन वटा प्याकेजमा ठेक्का लिएको जेभीले हालसम्म कूल भौतिक प्रगतिको १२ प्रतिशत रहेको जनाएको छ । सडक निर्माणमा विभिन्न समस्या आइरहेका कारण पनि काममा ढिलाई भइरहेको उनको भनाई छ । उनले राजमार्गस्तरको सडक भनिए तापनि हालसम्म सडक सीमा निर्धारण नहुँदा जग्गा अधिग्रहण हुन नसकेको, सडक सीमाको जग्गाको भूस्वामित्व जनताकै नाममा रहेको हुँदा सडक निर्माणको सीमा सुरक्षामा कठिनाई रहेको बताए ।
सूचना अधिकारी शर्माले सडक क्षेत्रभित्र पर्ने रुख कटानको प्रक्रिया लामो तथा झन्झटिलो हुँदा समेत निर्माण कार्यमा ढिलो भइरहेको बताए । उनका अनुसार वि.संं. २०७६÷०७७ मा सुरु भएको योजना वि.सं. २०८१÷०८२ मा सम्पन्न गरिसक्नु पर्नेछ ।
यो सडक तीन खण्डमा निर्माण हुने गरी ठेक्का सम्झौता भइसकेको छ भने बाँकी खण्डको डीपीआर सकिएर ठेक्का लगाउने तयारी छ । पहिलो खण्ड पूर्वको प्रस्थान विन्दु झापाको मेची डाँगीदेखि बुद्धशान्तिको शान्तिनगर सम्मको १० किलोमिटर रहेको छ । संघीय सरकारको बजेटबाट निर्माण हुने यो राजमार्ग दुई लेनको हुनेछ । बहुबर्षीय योजना अनुसार यो राजमार्ग बन्न लागेको हो ।
एमालेका तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारीको नाममा बनाइने यो राजमार्गले पूर्वको झापादेखि धरानको चतरा, उदयपरुको गाईघाट, कटारी, सिन्धुलीको सिन्धुलीमाडी, मकवानपुको हेटौंडा, नवलपरासीको गंैडाकोट, पाल्पाको रामपुरबाट गुल्मीको तम्घास, शिमलटारी, प्यूठानको बागदुला, देवीस्थान, दाङको घोराही, तुलसीपुर, पुरनधारा सुर्खेतको बोटचोर, डोटीको सिमचोर, वीपीनगर, कैलालीको सहजपुर हुँदै डडेलधुराको बुडर जोगबुढा हुँदै रुपालसम्म पुग्नेछ ।
पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गतबर्ष एकैपटक शिलान्यास गरेको सो सडक खण्डको ३१ वटा पुलहरुको निर्माण कार्य जारी रहेको उनको भनाई छ । सो सडकखण्डमा ११ वटा ठूला पुलहरु रहेका छन् । ३१ वटै पुलको निर्माण कार्यको ५० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको कार्यालयले जनाएको छ ।